Baden in-kalamanjana ..
Ny Cedar mafana tubs natao avy tandrefana Cedar Red Wood Clear. Io karazana hazo Tsy manam-paharoa noho ny fanoherana ny lo. Ny hanitry voajanahary miavaka mahafinaritra sy mampitony. Ny rafitra fibrous no miantoka ny rano optimum tightness ary no iray amin'ireo karazana hazo miaro tsara indrindra eto an-tany. Ny Hot Tubs dia misy amin'ny diameters isan-karazany avy 4 amin'ny 8 Ny olona ao amin'ny Natao ho toy ny mafana tsotra kovetabe fandroana na koveta be fandroana amin'ny avo-fampisehoana hazo-afo fatana sy ny 'Wooden Whirlpool’ amin'ny herinaratra fanafanana, Otra-fiaramanidina, Sivana rafitra sy Relax Light.
Wooden Hot kovetabe fandroana – Clear Western Red Cedar
Wooden mafana kovetabe fandroana amin'ny herinaratra fanafanana sy ny fanorana fiaramanidina
(12,920 Mpitsidika izay nihevitra ity lahatsoratra ity)
Suter Bea hoy i:
10. October 2017 amin'ny 18:13
Mba andefaso aho antontan-taratasy ho an'ny hazo any ivelany fitondrany sy hazo fanafanana ny kely indrindra dikan.
11. October 2017 amin'ny 3:28
Misaotra anao noho ny nanontany. Ny kely indrindra koveta mafana manana savaivony ny 150cm sy lehibe tamin'ny lafaoro ivelany ho an'ny 2-4 Ny olona. Ny antontan-taratasy sy ny vidiny lisitra izahay, naniraka tany aminao amin'ny alalan'ny e-mail.
Please niantso anay, Tel. 052 347 37 27. Faly isika mba hanampy.
Nino hoy i:
14. August 2014 amin'ny 23:45
Hello te fanazavana fanampiny momba ny whirlpools ? Misaotra anao mialoha
15. August 2014 amin'ny 17:27
Danke für Ihre Anfrage. Ny mahamay koveta amin'ny whirlpool dika manana safidy maro toy ny fanaraha-maso, Electric fanafanana, Fanorana-Jet Pumpe, Ozonator sy ny filtration rafi-. Afaka hametraka ny naniry koveta ireo mafana miara-dia toy izany no.